Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ရသသတင်း
လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပျော်မြူးနိုင်တဲ့ ရန်ကုန် ကန်တော်ကြီး သင်္ကြန်	အင်္ဂါနေ့၊ ဧပြီလ ၁၇ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၁၀ မိနစ်	အောင်ဝင်း	စီးပွားရေး မြို့တော် ဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့ ၂၀၁၂ မြန်မာ့ ရိုးရာ နှစ်သစ်ကူး သင်္ကြန်မှာ လူတန်းစား မရွေး စိတ်အေးချမ်းသာ ပျော်မြူးနိုင်တဲ့ နေရာတခုကို ပြပါဆိုရင် ...
အမှောင်ထဲမှာ စမ်းတဝါး	ကြာသပတေးနေ့၊ သြဂုတ်လ ၀၄ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၁၆ မိနစ်	ညီသစ်	စာအိတ်ပါးလေးတွေကို တင်းတင်းရင်းရင်း ဆုပ်ကိုင်ပြီး စက်ရုံပေါက်ဝကနေ မျှော်ငေးနေတတ်ကြတဲ့ မိသားစုတွေ လက်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်ရင်ဖြင့် လကုန်ရက် ဆိုတာ ပြက္ခဒိန် ကြည့်စရာမလိုတဲ့ မြင်ကွင်းကို အခုတော့ တွေ့ရတော့မှာ ...
ဒုက္ခနွံထဲမှ မျှော်လင့်သော အိပ်မက်များ	တနင်္လာနေ့၊ ဇွန်လ ၂၀ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၃ နာရီ ၂၅ မိနစ်	သဲသဲ “ကျနော် မပြန်ချင်တော့ဘူး။ စစ်တပ်ကို တအားမုန်းတယ် တွေ့လည်း မတွေ့ချင်ဘူး” ဟု စကားသံဝဲ၀ဲဖြင့် တုံးတိတိဆိုရင်း ပေါင်ပေါ်ထိုင်နေသည့် သားနှင့် သမီးကို ...
ဇေယျာသော်၏ သူရဲကောင်း စနေနေ့၊ မေလ ၂၈ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၅၅ မိနစ်	ဖနိဒါ ဟစ်ပ်ဟော့ပ် အဆိုတော် တူပက်ရှာကူး Tupac Shakur သည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်၌ အမေရိကန်တွင် လူဆိုးဂိုဏ်းအချင်းချင်း ပစ်ခတ်ရာမှ ...
ထောက်လှမ်းရေး မျက်လုံးအောက်က နိုင်ငံ	သောကြာနေ့၊ ဧပြီလ ၂၂ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၀၉ မိနစ်	Line Skovlund Larsen	အဖြစ်အပျက်က ရယ်စရာကောင်းပေမယ့် ကျမလည်း နည်းနည်းတော့ လန့်လာပါတယ်။ အစိုးရက ကျမတို့ကို ဓာတ်ပုံရိုက် မှတ်တမ်း တင်နေတာလားလို့ ...
ဒေါ်စု၏ ကမ္ဘာတွင်းသို့ ခေတ္တ ဝင်ရောက်ခြင်း	သောကြာနေ့၊ ဧပြီလ ၂၂ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၃ နာရီ ၀၂ မိနစ်	Laila de Champfleury	မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုရဲ့ သူရဲကောင်းဖြစ်တဲ့ သူဟာ စားပွဲပေါ် သူ့လက်တွေကို ခပ်ဖွဖွ ယှက်ထားပြီး အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်နေတာပါ။ ...
ကွဲကြေ တာလေ	အင်္ဂါနေ့၊ ဧပြီလ ၁၉ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၂ နာရီ ၀၅ မိနစ်	သက်ထွေး	ကျနော့်အမေ ငလျင်ထဲ ပါသွားတယ်။ အမေက ညဘက် အိမ်ထဲကို အစောကြီးမတက်ဘူး။ ကျန်တဲ့ သားသမီးတွေ အကုန်လုံးက အိမ်ပေါ်မှာ။ ...
ကရင်နီတောင်ကုန်း ယောင်ထုံးပေးဖို့	သောကြာနေ့၊ သြဂုတ်လ ၀၆ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၁၂ မိနစ်	ဒီမင်း	ဇွန်လ ၁၈ ရက်နဲ့ ၁၉ ရက်နေ့တွေတုန်းက လွိုင်ကော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်နဲ့ လွိုင်ကော် တက္ကသိုလ်က ကျောင်းသူကျောင်းသား အယောက် ၈ဝ လောက်ဟာ ... နာဂစ်တစ္ဆေ	အင်္ဂါနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၅၁ မိနစ်	မေမိုး	ဓနိပင်တွေ အစီအရီပေါက်နေတဲ့ ချောင်းနံဘေးက နေပြောက်ကျဲကျဲထိုးနေတဲ့ သစ်ပင်အောက်မှာ ခေါင်းငုံ့ရင်း သူ ဖြေးညင်းစွာ ... ”ကျမတို့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လိုပါပဲ”	ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ မေလ ၂၇ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၄၅ မိနစ်	“ကျမတို့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လိုပါပဲ။ ကိုယ့်အိမ်မှာ ကိုယ်နေပြီး အလိုလိုနေရင်း နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေကြရပါတယ်” အင်းစိန်ထောင်ဗူးဝအနီးမှာ စတိုးဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ အမျိုးသမီး တယောက်က ပြောလိုက်တာပါ။ ...
« ရှေ့ဆုံးမျက်နှာသို့ ရှေ့တမျက်နှာသို့ 12နောက်တမျက်နှာသို့ နောက်ဆုံးမျက်နှာသို့ »	စာမျက်နှာ 1 စုစုပေါင်း 2	ကြော်ငြာ
We have 59 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved